ဂျာမန်လူမျိုး ထိပ်တန်းဂီတစာဆိုကျော်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သူ လု(ဒ်)ဝစ် ဗန် ဘီသိုဗင် (အင်္ဂလိပ်: Ludwig van Beethoven; /ˈlʊdvɪɡ væn ˈbeɪˌtoʊvən/ ( ); ဂျာမန်: [ˈluːtvɪç fan ˈbeːtˌhoˑfn̩] ( ); ၁၇၇၀-၁၈၂၇) အား အကြီးမားဆုံး တေးပြုဂီတစာဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ် သတ်မှတ်ခေါ်တွင်ခဲ့ ကြရပေမည်။
လု(ဒ်)ဝစ် ဗန် ဘီသိုဗင်
ဂျိုးဆက်စတိီလာ၏ လက်ရာ ဘီသိုဗင် ပုံတူပန်းချီကား (၁၈၂၀)
၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၇၇၀ မတိုင်မီ
၂၆ မတ်လ ၁၈၂၇ (၅၆ နှစ်)
ယိုဟန် ဗန် ဘီသိုဗင် (ဖခင်)
မာရီယာ မဒလီနာ ကဲဗရစ်ရှ် (မိခင်)
ကက်စပါ အန်တွန် ကာလ် ဗန် ဘီသိုဗင် (ညီ)
နီကိုလောက်စ် ယိုဟန် ဗန် ဘီသိုဗင် (ညီ)
ဘီသိုဗင် (ဗေထော်ဗင်) ကို ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘွန်းမြို့ တွင်မွေးဖွားသည်။ ဂီတဆရာကြီးမိုဇတ် ထံတွင်လည်းကောင်း၊ နောင်တွင် ယိုးဆက်ဖ် ဟိုင်ဒင်ထံတွင်လည်းကောင်း ဂီတပညာဆည်းပူးသည်။ Moonlight Sonata, The Emperor Concerto တို့ အပါအဝင် လက်ရာမြောက်တေးဂီတများစွာကြောင့် နာမည်ထင်ရှားခဲ့သည်။ သူ၏ကျော်ကြားလှသော နဝမမြောက် ဆင်ဖိုနီသည် သံစုံတီးဝိုင်းလောကတွင် ပထမဆုံးသံပြိုင်တေး စတင်ထည့်ရေးခဲ့သော ဆင်ဖိုနီမျိုးပင်ဖြစ်သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဗွန်မြို့တွင် ၁၇၇၀-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့၌ ဖွားမြင်သည်။ ငယ်စဉ်ဘဝကပင် တေးဂီတနှင့် ပက်သက်၍ အစွမ်းအစများ ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ဂီတမျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ သူ၏အဖေ(Johann)နှင့် အဘဖြစ်သူ (Ludwig)သည် ဂီတသမားများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ဘီသိုဘင်ကို ကလေးဘဝကတည်းက ဂီတမှာ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်။
အသက် ၄ နှစ် အရွယ်မှစ၍ အဆိုတော် အမူးသမား ဖခင်၏ ရိုက်နှက်စေခိုင်းမှုကြောင့် စန္ဒရားတီး သင်ခဲ့ရသည်။ ကလေးဘဝ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ မနေရ၊ မကစားရဘဲ ခိုင်းသည့်အတိုင်း လုပ်နေရသည့် အချုပ်အချယ်ခံရမှုကြောင့် ဘီသိုဗင်၏ စိတ်ဓာတ်ကို ထိခိုက်သွားကာ နောင်အခါတွင် စိတ်ချောက်ချား တတ်ခြင်း၊ စိတ်တိုတောင်းခြင်း ဖြစ်လာတတ်လေသည်။
ဖခင်ဆိုးသည် အိမ်ထောင်၏ တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာမထမ်းလိုသဖြင့် အိမ်ထောင်စရိတ် ရှာနိုင်စေရန် ဂီတနယ်ထဲ အတင်းဆွဲသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ စင်စစ် ဘီသိုဗင်၌လည်း ငယ်စဉ်ကပင် ဂီတဘက်၌ ထူးချွန်မည့် အရည်အသွေးများ ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၁ နှစ်သား အရွယ်တွင် ကိုယ်တိုင် တေးဂီတများကို စပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၄ နှစ်သားအရွယ်တွင် နန်းတွင်းလက်ထောက် အော်ဂန်ဆရာ ဖြစ်လာသည်။ နောင်အခါတွင် အော်ခက်စတြာ တီးဝိုင်းများကို ခေါင်းဆောင် နိုင်ခဲ့လေသည်။
ဘီသိုဗင်တို့မိသားစု၏ အခြေအနေမှာ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ ဖခင်ကလည်း အိမ်ထောင်၏ တာဝန်ကို မယူလိုဘဲ ပေါ့ပေါ့နေသဖြင့် အိမ်သားများမှာ ဆင်းရဲကျပ်တည်းပြီးလျှင်၊ ကျန်းမာရေးလည်း ချို့တဲ့ကြသည်။ ဘီသိုဗင်သည် မသာယာသော အိမ်ထောင်စုကို ကျောထောက် နောက်ခံပြုကာ၊ သူ၏ ဂီတပညာကို တိုးသည်ထက်တိုးအောင် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ၁၇၈၃ အရောက်တွင် သူ၏ပထမဆုံးသော တေးဂီတလက်ရာကို စတင်ထုတ်ပြနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
၁၇ နှစ်သားအရွယ် ၁၇၈၇ ခုနှစ်တွင် ထိုစဉ်က ဂီတမြို့တော်ဖြစ်သော ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့သို့ သွားရောက်၍ ဂီတပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သော မိုးဇက်၏ရှေ့တွင် မိမိ၏စွမ်းရည်ကို ပြသခဲ့သည်။ ထိုအခါ မိုးဇက်က ဘီသိုဗင်သည် ကမ္ဘာ၌ သူ့ဂီတသံ လွှမ်းအောင် ပြုနိုင်မည့် သူဟူ၍ နိမိတ်ဖတ်လိုက်လေသည်။ မိုးဇက်ကွယ်လွန်ပြီး တစ်နှစ်အကြာ ၁၇၉၂ တွင် ဗီယင်နာသို့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရောက်လာကာ တေးဂီတပညာရှင် ဟေ့ထံတွင် ပညာသင်ယူခဲ့သည်။ ထိုမြို့တွင်ပင် အိမ်ထောင်မပြုဘဲ လူပျိုဘဝဖြင့် အသက်ထက်ဆုံးနေထိုင်သွားခဲ့သည်။
ဗီယင်နာမှ ပြန်ရောက်ပြီးနောက် မိခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်ရာ၊ အမူးသမား ဖခင်နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမ တို့၏ တာဝန်ကို ဘီသိုဗင်က လုံးဝတာဝန်ယူ ဆောင်ရသည်။ သို့ဖြစ်လင့်ကစား အိမ်သားများသည် သူ့အား စိတ်ချမ်းသာမှု မပေးဘဲ နားပူနားဆာ ပြုတတ်ကြလေသည်။ ယင်းသို့သော အခြေအနေကြားထဲမှပင် ဘီသိုဗင်၏ ဂီတစွမ်းရည်သည် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဗွန်းမြို့ရှိ ဩဇာတိက္ကမရှိသော လူကြီးလူကောင်းများက သူ၏ ဂီတစွမ်းရည်ကို အကြောင်းပြုပြီးလျှင် ဘီသိုဗင်အား ခင်မင်စေတနာ ထားကြသဖြင့် ဗီယင်နာမြို့တွင် ဂီတ ဝိဇ္ဇာကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျိုးဇက်ဟိုင်းဒင်ထံတွင် ဂီတပညာ ဆက်လက်ဆည်းပူးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးကြသည်။ ဗီယင်နာတွင် ဂီတပညာ ဆည်းပူးခဲ့ပြီးနောက်တွင် ဘီသိုဗင်သည် ထိပ်တန်း ဂီတစာဆို တစ်ဦး အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။
ဘီသိုဗင်သည် စန္ဒရားအတတ်တွင် ပါရမီထူးကာ တစ်ဖက်ကမ်းခပ် ကျွမ်းကျင်သည်။ ကိုယ်တိုင်တီးခတ်ခြင်းနှင့် အခြားသူများအား သင်တန်းပေးခြင်းနှစ်မျိုးလုံးတွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားလှပါသည်။ မကြာမီပင် ကျွမ်းကျင်သူအဆင့်ရှိသည့် ဂီတပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီး သူ၏လက်ရာများမှာလည်း အများက အမွန်တမြတ် နားထောင်လာကြရသည်။ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ်မှစကာ သူ၏ဂီတလက်ရာများကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရောင်းချလာကြသည်။
ဘီသိုဗင် (၁၈၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ရေးဆွဲထားသည်)
ယင်းသို့ထိပ်ထိပ်ကြဲ ဂီတပညာရှင် တစ်ဦးအဖြစ်သို့ ရောက်ခဲ့ပြန်သော်လည်း၊ စိတ်မချမ်းသာဖွယ်ရာ တစ်မျိုးသည် ဘီသိုဗင်၏အပေါ် လောင်းရိပ်ကဲ့သို့ မိုးလာပြန်လေသည်။ ယင်းသည်ကား တဖြည်းဖြည်း နားလေးလာရာက နောက်ဆုံးတွင် မကြားရသော ဘဝသို့ရောက်ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြလှသော ဘီသိုဗင်သည် ယင်းသို့သော အကုသိုလ်ဖိစီးမှုကို လွယ်လွယ်နှင့် အရှုံးမပေးချေ။ အသက် ၃ဝ-ခန့်ရောက်သော် နားထိုင်းစပြုလာပြီး ထိုရောဂါလက္ခဏာအား ကြောက်လန့်လာသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရန်ပင် ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ၁၈၀၂ မှ ၁၈၁၅ ကာလများအတွင်းတွင် လူလတ်ပိုင်းအရွယ် ဘီသိုဗင်သည် နားမကြားသည့် ရောဂါအားပိုမိုဖိစီးခံစားလာရသဖြင့် လူတောမတိုးသည့် ဘဝဖြင့်နေထိုင်လာခဲ့ရရှာသည်။ အကြောင်းမသိသူတို့က သူ့အား လူအချင်းချင်း ရွံ့မုန်းတတ်သူအဖြစ် ထင်မှားခဲ့ကြသည်။ မိန်းမပျိုများနှင့် ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုများ ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း ရေရှည်မခံသကဲ့သို့ အိမ်ထောင်လည်း မပြုခဲ့ပေ။ ထိုအချိန်ထိ သူ၏လက်ရာကောင်း၊ လက်ရာမွန်များစွာ ဆက်တိုက်ပင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ လူတို့အကြိုက်ကိုလိုက်ကာ ရေးစပ်သီဖွဲ့သည်မဟုတ်၍ ထိုခေတ်အခြေအနေဖြင့် တွင်ကျယ်မည်ကို သေချာမပြောနိုင်သည့်တိုင် လူအများက လက်ခံနားဆင်ခဲ့ကြသည်။
ခရစ်ရှန် ဟောနဲမန်း (Christian Horneman) ရေးဆွဲထားသော ဘီသိုဗင်၏ပန်းချီ (၁၈၀၃)
အသံကို အကြောင်းပြုရသော မိမိ၏ ပညာလုပ်ငန်းကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ၊ အသံမကြားရသည့် ဘဝ၌ပင် ဆက်လက်၍ တေးဂီတကြီးများကို စပ်ဆိုစီကုံးခဲ့သည်။ နားမကြားရသည့် နောက်ပိုင်းတွင် စပ်ဆိုသည့် တေးကြီးတေးခန့်များသည် ဘီသိုဗင်၏ အကောင်းဆုံး လက်ရာများဟု ဆိုကြလေသည်။
ဘီသိုဗင်သည် အရုပ်ဆိုးသော်လည်း ပင်ကိုသဘော တည်ကြည်မှု၊ သူ၏ထူးချွန်သော ဂီတပါရမီတို့ကြောင့် သူ့အား ကြည်ညိုလေးစားသူများပြားသည်။ သို့သော် ဘီသိုဗင် နားထိုင်းရောဂါ ဖြစ်ပြီးနောက်တွင် သူ၏ ညီအစ်ကို မောင်နှမများက သူ၏ ငွေကြေးကိစ္စကို ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ဘီသိုဗင်အား ခင်မင်ကြသူများနှင့် စိမ်းသွားခဲ့ရသည်။
မိဘဆွေမျိုးအတွက် တာဝန်ကြီး ထမ်းခဲ့ရသော်လည်း ဆွေမျိုးအကျိုးပေးလည်း မကောင်းခဲ့ပေ။ ချစ်ကိစ္စများ၌လည်း ကံခေခဲ့သဖြင့် အိမ်ထောင်မပြုခဲ့သော ဘီသိုဗင်သည် တူတစ်ယောက်အား သားရင်းတမျှ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခဲ့ရာ ထိုသူသည် သူ့အား စိတ်ဒုက္ခအပေးဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့သော စိတ်မချမ်းသာဖွယ် အမျိုးမျိုးကို ကြိုးစားတွန်းလှန်ခဲ့ရသော ဘီသိုဗင်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ မျိုသိပ်မထားနိုင်ဘဲ ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲတတ်သည်။ ဘီသိုဗင် ရေးခဲ့သော သေတမ်းစာတစ်စောင်ထဲတွင် မိမိသည် နားထိုင်းခြင်း စသည့်ဒုက္ခအမျိုးမျိုး စိတ်မချမ်းသာဖွယ် အဖုံဖုံတို့ကို ခံစားရလွန်း၍ မချိတင်ကဲဖြစ်ကာ၊ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ပြီးလျှင် မိမိ ဒေါသတကြီး ဖြစ်မိသည်များကို ညီအစ်ကို မောင်နှမများကခွင့်လွှတ်ပါရန် ရေးသားထားလေသည်။
ဘီသိုဗင်အဖို့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး သူရင်ဆိုင်ရသော စိတ်မချမ်းသာမှုများသည် သူ့အား ဘဝကို အရှုံးမပေးလိုအောင် သွေးထိုးပေးသကဲ့သို့ရှိပြီးလျှင် တေးဂီတ တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ် သူ့ကလောင်များမှ ထွက်ခဲ့သည်။ သီချင်း ရိုးရိုးမှ ဂီတပြဇာတ်ကြီးများအထိ စပ်ဆိုရေးသားခဲ့ရာ သူ၏ ဂီတစွမ်းရည် ထက်မြက်ထူးချွန်ပုံကို အကဲခတ်နိုင်ပေသည်။
အိပ်ရာပေါ်၌ ဘီသိုဗင်၏ ရုပ်ကလာပ် (ယိုးစပ်ဖ် ဒန်ဟောင်ဆာ (Josef Danhauser) မှရေးဆွဲထားသည်)
ဘီသိုဗင်သည် ကောင်းစွာ မကျန်းမမာ ဖြစ်နေရာမှ အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် ၁၈၂၇ ခုနှစ်တွင် ညီဖြစ်သူထံ အလည်သွားရင်း ဗီယင်နာမြို့၌ပင် ကွယ်လွန်သည်။ ဘီသိုဗင် ကွယ်လွန်ပြီးသည့် နောက်တွင် ထူးခြားသော ဂီတပညာရှင်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သူ၏ ဇာတိဖြစ်သော ဗွန်းမြို့တွင်လည်းကောင်း၊ သူ၏ သင်္ချိုင်းရှိရာ ဗီယင်နာမြို့၌လည်းကောင်း သူ၏ ရုပ်တုများကို ထားရှိပြီးလျှင် ဘီသိုဗင်မွေးဖွားခဲ့ရာ နေအိမ်ကို ပြတိုက်အဖြစ် ပြုလုပ်ထားရှိလေသည်။
စန္ဒရားဆိုနာတာ အမှတ် ၈၊ ၁၄၊ ၂၀၊ ၂၉၊ ၃၁၊ ၃၂
Sonata No. 32 in C minor. I. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
ဆင်ဖိုနီ အမှတ် ၃၊ ၇၊ ၉
Symphony No.9in D minor, I. Allegro Ma Non Troppo Un Poco Maestoso
Symphony No.9in D minor, II. Molto Vivace
Symphony No.9in D minor, III. Adagio MoltoeCantabile Andante
Symphony No.9in D minor, IV. Presto (Ode to Joy)